Nepal: Mpanao gazety notafihana noho ny fanaovana tatitra iraisam-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Desambra 2010 10:50 GMT
Shreedeep Rayamajhi, mpanao gazety Nepale dia sady mpanao gazety no mpitoraka bilaogy matihanina, manoratra ho ana Fikambanana Fampahalalam-baovao iraisam-pirenena toy ny GroundReport sy ny CNN's iReport. Rayamajhi dia manoratra ihany koa ho ana gazety an-tsoratra manana ny lanjany ao an-toerana ihany, toy ny ‘the Nepal Travellers Publication’, sady miasa ho an'ny Amerikana mpanao asa maimaimpoana ao Kathmandu.
Nanomboka nahazo mailaka tsy misy sonia noho ny asa maha-mpanao gazety azy i Rayamajhi volana maro lasa izay, izay notateriny avy eo tamin'ny 14 Novambra. Ny 16 Novambra, nilaza i Rayamajhi fa nisy nanafika, tapaka ny taolam-panaviny ary nioritra ny hato-tongony. Notateriny tamin'ny mpitandro filaminana tao an-toerana ny fanafihana nahazo azy, saingy satria izy mpanao gazety tsy miankina, tsy misy media manohana ao an-damosiny, dia tsy noraisina ho tena zava-dehibe ny momba azy. Nilaza taminay i Rayamajhi fa nitsahatra tsy nitatitra izy ary matahotra ny amin'ny ainy.
Araka ny tatitra iray nataon'ny Komity Miaro ny Mpanao gazety, dia matetika no iharan'ny fanafihana miharo herisetra ireo mpanao gazety ao Nepal; tamin'ny 2010, tompona fanaovan-gazety telo no nisy nitifitra ho faty, ary enina raha kely indrindra ny mpanao gazety nisy namono noho ny asan'izy ireny hatramin'ny taona 2000.
Ny tantaran'i Rayamajhi dia azonao vakiana amin'ny fomba nanoratany azy manokana ao amin'ny Ground Report.
24 Septambra 2021Azia Atsimo
Soratra miverina: Et Madagascar entre dans la danse…ou plutot l’ère de la CENSURE « GAZETY_ADALADALA
[…] dans le monde, comme c’est le cas en Iran, Chine, Moyen Orient, Népal, on procède à l’arrestation des bloggers quand ils ne ‘véhiculent’ pas ce […]
26 Desambra 2010, 06:08